Tattoos ragga. Soo ogow noocyada tattoosyada jira | Ragga Stylish
Haddii aad ka mid tahay kuwa raadinaya noocyadooda tattoos loogu talagalay ragga taas oo sida ugu fiican ku timaadda, waa inaad doorataa wax macno kuu leh. Waxaan ka hadlaynaa wax aad mari doontid maqaarkaaga inta aad nooshahay. Waa muhiim inay macno leeyihiin oo aadan "caajisin" markaad u fiirsato muddo kadib. Sannadihii ugu dambeeyay buuggaagta loo yaqaan 'tattoo katalogs' waxay ku fiicnaadeen baaxad weyn. Tattoo-ga ragga ma laha wax la sameeyo waxa ilaa hadda la qabtay.
Maqaalkani waxaan kuu sheegeynaa midka ugu fiican ee loo yaqaan 'tattoos' ragga.
1 Fikradaha Tattoo ee ragga
2 Halkee laga helayaa sawirka
2.3 Gacmaha iyo garbaha
3 Tattoos loogu talagalay ragga xabadka iyo dhabarka
Fikradaha Tattoo ee ragga
Midda ugu horreysa waxa weeye waa inaan sameyno sadar yar oo aan xaqiijino in sida aan uga hadlayno tattoos loogu talagalay ragga maaddaama aysan jirin. Taasi waa, ma jiraan naqshado loogu talagalay oo keliya ragga ama dumarka. Tattoos-ka waa inay lahaadaan macno la xiriira qofka sameynaya. Waxay noqon karaan dhinacyo sida xoog, geesinimo, awood, is-hagaajin, dad muhiim ah, walxo, iwm
Tattoo-ku waa shay aad u shakhsi ah oo qof kasta oo qaadanaya uu ku khasbanaado inuu tixgeliyo. Waxaa jira nashqado badan oo qaabab lab ah oo gacan ka geysta bixinta kumanaan fikrado suurtagal ah oo laga fiirsado, mid walbana leh macno shaqsiyadeed. Noocyadan waxay kaa caawin karaan iyagoo tusaale fiican u ah halka aan ku qaadi karno sawirka. Tattoo-gu waa tattoos qof walbana naqshaddiisu waa adduun. Naqshad wanaagsani waa marka ay metelayso waxa ku jira iyo qiimaha uu qofku siinayo taas oo ku taal qayb ka mid ah jidhka meesha ay si qurux ahaan ugu wanaagsan tahay.
Marka la soo koobo, waa inaad raadisaa tattoo oo macno muhiim ah kuu leh adiga oo aad iska ilowdaa dhinacyada intiisa kale. Ma jiraan nashqado lab ah sida tan maadaama naqshaddu tahay naqshad, muddo. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira nashqado qaar oo la kulmaya rajooyinka iyo dhadhanka guud ee inta badan ragga ragga.
Halkee laga helayaa sawirka
Tattoo waxaa lagu sameyn karaa meel kasta oo jirka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qodobbo qaarkood oo astaamaha loo baahan yahay in si faahfaahsan loo faahfaahiyo. Meelaha ugu caansan ee ragga ka mid ah iyo nooca tattoos ee la samayn karo. Kuwa ugu caansan waa tattoos loogu talagalay ragga gacanta. Waa naqshado caadiyan loo yaqaan qabyaalad. Inta badan kali-socodka caadiga ah ee laga helo ragga oo laga sameeyo gacanta. Kuwani waa qaabab joomatari ah oo ku jira qaabka Maori ee ku habboon anatomy-ka gacanta.
Haddii aad ku sameysid tattoo leh naqshad iyo madow waxay u taagnaan doontaa dabeecad adag oo xoog leh. Xusuusnow in nashqadahaan ay sameeyeen halyeeyadii ugu geesisanaa ee qabiilooyinka. Waxaan sidoo kale helnaa nashqado aad u sameysid rag kuwaas oo ku yaalo labada dhudhun oo jilaan jijin. Naqshadahan waxaan ku arki karnaa waxyaabo kala duwan oo qaab casri ah ama heer sare ah.
Waxaa jira nashqado ka baxa indhaha shabeelka, weedh ku jirta warqad calaamado ah ama goob ka mid ah cayaaraha aan jecel nahay. Tattoo gacmo-gacmeedka nuska ah ee ragga ayaa sidoo kale u muuqda kuwo aad u fiican. Iyaga ayaa ah naqshad caan ku ah dhagaystayaasha ragga waxayna badanaa leeyihiin natiijooyin wanaagsan.
Dhulku wuxuu sidoo kale ku yaal meel lagu taliyay in lagu sawiro ragga. Ma aha inay daruuri tahay in la daboolo dhammaan booska oo dhan, laakiin waxaan kala duwanaan karnaa laba meelood oo ay ku badan yihiin: qaybta bowdada iyo qeybta kubka. Moodada loo yaqaan 'tattoos' ee loogu talagalay ragga lugta lugta waxay ku xiran tahay soo-gaadhista ay leeyihiin ciyaartoydu. Ciyaartooyda kubada cagta ayaa ku leh tatooyooyin badan lugahooda qaabka nuucaan ah ayaa noqday mid caan ah.
Intaas waxaa sii dheer, lugaha waa aag aan ku yeelan karno astaamo badan oo yar yar ama aan halis ugu jirno inaan yeelano shaqo ballaaran oo dabooleysa xubnaha oo dhan. Qaar ka mid ah nashqadaha u muuqan kara si fiican lugahaaga ayaa ah:
Qaababka joomatari oo sii libdamaya maadaama ay kuso dhowaanayaan anqawga oo ay sii yaraanayaan.
Muuqaallo caadi ah oo aan awoodno aragtida meelaha banaan waa kuwo taban oo ka buuxi daruuro, hirar ama walxo keli ah.
Waxaan sidoo kale ku dhejin karnaa shaxda dhexe ee mataanaha iyo gadaasha shimbir weyn oo baalasheeda ku fidisa dhulka intiisa kale. Mid ka mid ah naqshadaha aadka loo jecel yahay ayaa ah in la xidho dagaalyahan samurai ah.
Waa muhiim inaan ku ciyaarno fursadaha labada dhinac ee hindisada iyo meesha ay ku yaalliin labada walxood. Sidan ayaan ku heli karnaa nashqado shaqsiyadeed oo dheeri ah, haddii isla markaa aan soo bandhigi karno macnahayaga, waxaan yeelan doonnaa tattoo buuxa.
Gacmaha iyo garbaha
Gacanta hore waa mid ka mid ah meelaha ugu dhaqanka badan ee lagu gashado tattoo. Naqshaduhu si fiican ayey u socdaan oo waxay leeyihiin natiijooyin wanaagsan haddii ninku leeyahay murqo wanaagsan oo dhinaca hore ah. Waxaad kala dooran kartaa ikhtiyaarro badan oo ah tattoos loogu talagalay ragga gacanta hore oo muuji naqshadeyntaada maadaama ay u muuqan doonto mid aad u wanaagsan.
Garabku waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee lagu xidho tattoo. Waad sameyn kartaa virguerías dhab ah si tattoosyada leh naqshad weyn loo daayo. Dhibaatada ka haysata astaantan ayaa ah inay qaadato kulamo badan si loo daboolo aagga oo dhan. Tani waxay keenaysaa in qiimaha uu aad u kordhay. Haddii aad rabto wax ka dhib yar, waxaan u isticmaali karnaa tattoo garabka oo u muuqda mid aad u fiican laakiin qaybta bartamaha. Maaha inay si buuxda u daboosho aagga oo dhan. Qeybta dhexe ee garabka waxaa loo isticmaali karaa in lagu meeleeyo tattoo si loo waafajiyo qeybta dhexe ee garabka garabka. Haddii naqshadeynta ay halkaas uga sii gudubto dibadda, waxay noqon doontaa mid saami ah oo si fiican loo dhigo.
Tattoos loogu talagalay ragga xabadka iyo dhabarka
Alwaaxda hibada leh ee loogu talagalay ragga xabadka ayaa u muuqda kuwo aad u fiican. Waa wax soo jireen ah waxaadna ka heli kartaa cunsurro aad muhiim u ah. Waa lagama maarmaan in la ilaaliyo joomatari iyo u dhiganta noocyada nashqadahaas.
Sida astaamaha dhabarka, wiilashu waxay badanaa leeyihiin dhabarka aad u ballaaran, sidaa darteed qaabeynta waxay ku muujin kartaa dhammaan quruxdeeda.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto noocyada kala duwan ee Tattoo-ka ragga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tattoos ragga